UMthetho Wokubhange kwe-SAFE | Ukuqiniswa Okuphephile Nokulungile kwebhizinisi leCannabis
Umthetho Wezimali Wasebhange i-SAFE
Ukuvikeleka Okuphephile Nokulungile (SAFE) Banking Act ka-2019
UMthethosivivinywa wethulwe kuCongress wathi: Ukuvikeleka Okuphephile Nokulungile (SAFE) Banking Act ka-2019 kufaka nezinguquko ezinkulu kunqubomgomo yensangu yenhlangano. Umthetho weSAFE wenza okulandelayo:
Itheku elivikelekile leZikhungo Zokugcina
Abalawuli be-Federal Bank abakwazi ukwenqabela "amabhizinisi asemthethweni ahlobene ne-cannabis" (CRLB)
akukho zenzo ezimbi ezenziwa abasebenzi be-CRLB
izindlu ezithengiswayo ezihlobene ne-CRLB
Vikela amabhizinisi Ancillary kusuka ku:
Izimali ezingekho emthethweni zomsebenzi I-18 USC 1957
Ukuhlukana Kwemali I-18 USC 1956
Ukuvikelwa Ngaphansi Komthetho Wenhlangano
Ngokuvamile kuvikelwe ngaphansi komthetho wamasheya uma umthetho wezwe uthobela
Ukuvikelwa kwesimo sokuvikela ama-CLRBs
Akudingeki Ukubolekisela kuma-CLRB
Ukucacisa Kwimibiko Yomsebenzi Oyisolisayo (i-SAR)
Ngokuvamile Landela Isiqondiso se-FINcen
Isiqondisi kufanele silandele umthetho we-SAFE
Umthetho Ophephile Webhange kufanele uvumele ukuthengiselana nge-cannabis kumakhadi wesikweletu
Lapho - lokho ngamafuphi & Okusobala okufushane koMthetho we-SAFE. Ake sixoxe ngokuthi kusho ukuthini nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi ube ngumthetho wokuqala wensangu ukukwenza kuZibophezele. Kepha uma udinga, ngazo zonke izindlela, sicela…
Thintana nabameli bethu bebhangi yaseCannabis
Uma isikhungo sakho sezezimali sinombuzo nge-cannabis yasebhange, ummeli wethu wokusungula i-cannabis wasebenza kuphela ngamabhange kwinqubo yokuthengisa eyinkimbinkimbi - futhi uvame ukushicilela ezindaweni zasebhange nase-cannabis - ngakho-ke nikeza abameli bethu be-cannabis namuhla e- (309) 740-4033 ukuxoxa nge SAFE Banking Act.
Ufuna Ukhulume Ngebhizinisi Lakho le-Cannabis?
Isimo Somthetho Sokubhange kwe-SAFE
Ngokokuqala ngqa emlandweni wokuqiniswa kwensangu, umthethosivivinywa wokukhawulela izinhlawulo zobugebengu zensangu uyikhiphe ekomitini. The Safe and Fair Enforcing Act of the 116th Congress, kufaka phakathi abaxhasi abaningi, kubandakanya noRaja Krishnamoorthi wase-Illinois.
Umthetho webhange leSAFE uvimba abalawuli bebhange ukuvala “amabhizinisi asemthethweni ahlobene ne-cannabis” ezinsizakalweni zezezimali.
SAFE Banking Act Vote kuCongress
Ngoba iSAFE Banking Act iyenze yavela ekomitini, iqhubekela phambili esiteji esitezi - isigaba esilandelayo kwinqubo yezomthetho. Sizophinda sithathe izinyathelo eziyisikhombisa ezinkulu kwinqubo yezomthetho okwesikhashana, kepha uma ufuna ukubukeza umbhalo womthetho. Zizwe ukhululekile ngokuchofoza isixhumanisi esingezansi - noma skrolela phansi ukuze usihlaziye.
Umbhalo ogcwele we-SAFE Banking Act Lapha.
Inqubo Yomthetho inezinyathelo eziyisikhombisa ezinkulu. Kuze kube ngu-2019, umthethosivivinywa wezinsolo zemishado ngamunye awukaze ukwenze kube yisinyathelo sesibili - inqubo yekomidi. Ake siphinde sithathe zonke izinyathelo eziyisikhombisa zokwenza umthetho.
Isikhathi Sokwenza Esiphansi
Lo Mthethosivivinywa uya ekomitini
Ngakho-ke kusekuningi okungenza okungahambi kahle ngaphambi kokuthi umthetho we-SAFE Banking Act ube ngumthetho. Lo Mthethosivivinywa manje kufanele uthole i-Floor Action, lapho kuchitshiyelwa futhi kuchitshiyelwa izichibiyelo zomthethosivivinywa.
Lapho amavoti ezobanjwa kuyo kuncike ekutheni ingakanani le ngxoxo etholwayo, lapho-ke nayo kufanele idlule eSenate - lapho isengafela khona.
I-TL; i-DR Version ye-SAFE Banking Act
Kusekude ukuthi uhambe, kepha yimali ephumelela kakhulu yokuqinisekisa ukwenziwa kwensangu - futhi isebenza ngokusemthethweni ngokusemthethweni insangu ezifundazweni eziyivumelayo - futhi ivumela ukubhengeza kubhizinisi elihlobene neCannabis Legitimate Businesses (CRLB)
Yini Ibhizinisi Lasemthethweni elihlobene neCannabis
Impendulo emfushane, engasho lutho yilokho okushiwo yi-SAFE Banking Act. Ngokuyisisekelo, yibhizinisi le-cannabis elisebenza ngokulandela imithetho yezwe lalo .Izivikelo ezingaphansi kweSAFE Banking Act zinweba ngaphezu kwama-CRLB bese zingena kubasebenzi bazo, ngisho nezindlu zingabanini.
Kuphephile Ukuya Ebhange - Kuzwakala Njengokutshalwa Kwezimali
Itheku Eliphephile Lamabhange
Abalawuli bamabhange afakwe insured ngeke bakwazi ukuqeda umshwalense we-FDIC webhizinisi le-CRLB. Ngaphezu kwalokho abalawuli be-federal abakwazi ukujezisa ibhange ngokunikezela ngezinsizakalo hhayi kuma-CRLB kuphela, kodwa nakubasebenzi babo kanye nanoma yikuphi ukuqashiswa kwemishini noma kwezezakhiwo iCRLB enayo.
Ukuvikelwa kwamabhizinisi Ancillary
Akuvikelekile ama-CRLBs kuphela, kepha futhi nemithetho yokuLondolozwa kweMali nokuthengiselana okubandakanya imisebenzi engekho emthethweni (njengokushushumbisa insangu - i-schedule I element ngaphansi kweCSA).
Ukuvikelwa Okungaphezulu Kwe-Federal kwama-CRLB
Amabhange awanakuba "ophoqelekile kunoma yimuphi umthetho we-Federal noma umthethonqubo" wokuhlinzeka ngezinsizakalo zezezimali kuma-CRLB, noma ngokuqhubeka nokutshala imali etholwayo evela kulawo masevisi asebhange.
Kepha linda - kunokuningi!
Imithetho yokulahlekelwa kwempahla ngeke futhi isebenze kuma-CRLB abolekwe imali ebhange okubandakanya ukubambisana - okusho ukuthi ama-CRLB angaba nemali mboleko yasebhange yendawo ethengiswayo noma okokusebenza ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi imithetho ye-Federal forfaiture yokushushumbisa kuHlelo I izinto ngeke ilunge zisebenza.
Amabhange Akadingeki Ukubolekwa kuma-CRLB
Amabhange angafuni ukubolekwa ama-CRLBs akudingeki ukuthi abe ngaphansi kweSAFE Banking Act - kodwa lawo afuna ukwenza imali angakwazi.
Ukucacisa Kwimibiko Yomsebenzi Osolisayo
Ukuqondiswa kwe-FINcen okuvela ekuphathweni kwe-Obama for Suspative Acaction Reports (SARs) kuqiniswa futhi kuqiniswa nguMthetho Wokubhange kweSAFE. Ukuqondiswa kwe-FINcen okuvela kubaphathi bakwa-Obama kusetha umgomo wamazinga amathathu ahlukile ama-SAR wamabhange abolekwe ama-CRLB.
Umthetho webhange leSAFE uyaqhubeka ngokudinga umhlahlandlela we-FINcen wesikhathi esizayo ukuze uhambisane nomthetho weSAFE Banking Act.
Isiphetho: Amavoti weCongress angama-116 e-SAFE Banking Act
Akucaci njengoba kufanele kube njalo, kakhulu njengemithetho yase-cannabis yaseMelika. Kepha iSAFE Banking Act ingumthetho omuhle kakhulu wensangu owake wakwenza kwaba ngaphandle kwekomidi emlandweni kahulumeni wobumbano - ongaba nobulungiswa umugqa ophansi kakhulu.
Okuthuthukile Kwamuva kuMthetho Webhange leSAFE
IMIPHUMELA YOKUVIKELA YOKUVIKELA - Ephreli 20, 2020
Sibhale ngaphambi mayelana ne- "SAFE Banking Act", umthethosivivinywa wama-bipartisan wokusiza imboni ye-cannabis burgeonis ukuthi ifinyelele kwizinsizakalo eziyisisekelo zezezimali. Isisekelo soMthetho ukuhlinzeka ngetheku eliphephile kwizinyunyana zezikweletu kanye namabhange azimele ukuthola i-state charter-charter, ngenhloso yokuhlinzeka ngezinsizakalo emabhizinisini e-cannabis amabhizinisi asemthethweni. Emuva ngoSepthemba 2019, umthethosivivinywa idlulile INdlu yabaMeleli nyakenye ngoSepthemba ngonyaka owedlule ngamavoti angama-321- 103. Isikweletu somlingani weSenethi, S.1200, inabaxhasi abangama-33, abahlanu babo okungabaSenameli baseRepublican, kufaka phakathi uCory Gardner waseColorado, okungenzeka ukuthi uyiSenator yaseRepublican esengozini enkulu kakhulu yokwakha kabusha lo nyaka. Izingqinamba zokwenziwa kabusha kukaSenator Gardner zingadlala indima enkulu ezinhlelweni zomthetho weSenethi unyaka wonke. Ngaphezu kwalokho, uSenator Rand Paul waseKentucky naye ungumxhasi ngokubambisana kulo mthethosivivinywa, ongakholisa kuSenate Majority abaholi kanye noKentuckian, uMitch McConnell.
Isibonelelo seCovid-19 Sosomabhizinisi Amancanyana Singahlanganisa I-Cannabis SAFE Banking
Ngeshwa, ubhubhane oluqhubekayo lwe-COVID-19 selumise cishe yonke imizamo yezomthetho e-DC nakuzo zonke izifundazwe. Umjikelezo wokuqala we-COVID-19 wokusiza, i-CarES Act, uqukethe inqwaba yezinhlelo ezenzelwe ukusiza amabhizinisi amancane hhayi amancane ezweni lonke. Itshe legumbi le-CarES Act yi "Paycheck Protection Program", noma i-PPP. Ngenkathi uhlelo njengamanje seluphelelwe yimali, iThe okungumsu wohlelo luqondile. I-Small Business Administration (SBA) ihlinzeka ngemalimboleko kumabhizinisi amancane ukuze kugcinwe abasebenzi behola. Inqobo nje uma bonke abasebenzi begcinwa kumaholo amasonto ayisishiyagalombili, futhi imali isetshenziselwa ukubhadala, ukuqasha, inzalo yempahla ebanjiswayo, noma izinto ezisetshenziswayo, i-SBA izothethelela yonke imalimboleko. Ngisho nasezifundweni ezifana ne-Illinois lapho i-cannabis kuye kwathiwa "kubalulekile"Amabhizinisi, amabhizinisi e-cannabis abelukhuni ngesikhathi sokuhlukaniswa kwabantu futhi angazuza kakhulu kulolu hlelo.
Ngawo wonke amathuba, i-PPP izophinda yenziwe ezinsukwini ezizayo. Umzabalazo ubukeka kungukuthi ngabe i-PPP izoyithola yini injekisweni eqondile yezimali ngebhili "elihlanzekile", noma izodlula njengengxenye yohlobo oluthile lwephakethe elikhulu losizo. Esimweni lapho kungenzeka ukuthi kungabikho mthethosivivinywa "ohlanzekile", abenzi bezomthetho bavele baxoxa ngezinye izinhlelo zokuxhasa ngezimali njengengxenye yomzamo wokusiza omkhulu we-COVID-19. U-Ed Perlmutter (D-CO), umxhasi wokuqala weSAFE Banking Act kubikiwe ngethemba lokuthola uhlobo oluthile lweSAFE Banking Act ibe yiphakeji losizo lwe-COVID-19. Kunzima ukusho ukuthi kungenzeka kanjani lokhu, kepha amabhange angazithola enobubanzi bamathuba amasha we-cannabis ngokushesha kunalokho obekulindelwe.